Warbixin cusub oo gudniinka dumarka ku saabsan oo soo baxday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Warbixin cusub oo gudniinka dumarka ku saabsan oo soo baxdayFoto: TT/Scanpix
Warbixin cusub oo gudniinka dumarka ku saabsan oo soo baxday
La daabacay torsdag 15 januari 2015 kl 17.00
Maamulka hoggaanka degmadu isaga oo ka duulaya tirakoobka ay samaysay qaramada midoobay, waxa uu diyaariyay qiyaas ah in ay waddankan Iswiidhan ku nool yihiin dumar badan oo lagu soo guday waddamadii ay ka yimaaddeen.
Laga soo bilaabo kowdii bishan janaayo, waxa gudniinka lagu dari doonaa diiwaanka baadhitaanada cudurada ee xarumaha caafimaadka Sweden. Haayadda caafimaadka adduunka ayaa hore u samaysay summad u gaar ah gudniinka taasi oo la yidhaa ICD-kod. Taasi ayay hadda maamulada degmooyinku u turjumeen af Iswiidhish. Malin Ahrne oo ah sarkaalad ka tirsan hoggaanka bulshada ayaa aaminsan in hannaankani fududayn doono in si fiican loo fahmo dhibaatada gudniinku uu leeyahay.
Gudniinka ayaa dhibaato jidheed iyo mid maskaxeed ba u gaysta qof la gudo. Waxaanu saamayn xun ku yeeshaa hab-nololeedka qofka iyo waliba baahidiisa jinsiga. Sidoo kale waxa uu dhibaato u gaystaa xubnaha taranka ee qofka iyo waliba kaadimareenka. Taasina waxa ay keentaa in ay haweenaydu dhibaato la kulanto marka ay uurka leedahay ama marka ay umusho.
Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dumarka la guday ee adduunka ku nooli ay dhan yihiin 140 milyan oo dumar ah, kuwaasi oo badidoodu ku dhaqan yihiin qaaradda Afrika, halka ay tiro badanina ku nooshahay bariga dhexe. Waxa jirta qiyaas ay qaramada midoobay samaysay oo sheegaysa in 27 dal oo Afrika ku yaalla uu gudniinku ku xooggan yahay. Baadhitaan uu maamulka hoggaanka degmadu sameeyayna waxa uu ku ogaaday in ay Iswiidhan ku nool yihiin 38 000 dumar ah oo la soo kulmay noocyada kala duwan ee gudniinka intii aanay Iswiidhan iman. 7000 oo ka mid ahi waa gabdho yar yar oo da'doodu ka hoosayso 18 jir. Iswiidhan waxa gudniinka laga mabnuucay sannadkii 1982, sidaasi daraadeed badi haweenku waxa ay gudniinka la soo kulmaan waddamada ay ka yimaadeen.